Kubvunzana naVictor Mayoral mubatsiri weErle Robotic | Linux Vakapindwa muropa
Kubvunzana naVictor Mayoral Vilches, mubatanidzwa-muvambi weErle Robotic
Victor Mayoral Vilches akabvuma kubvunzurudzwa isu chete. Kune avo vasati vamuziva, izvo zvandinovimba kuti pane vashoma, Victor nemukoma wake David ndivo vavambi vekubudirira uye kupayona kutanga Erle Robotics. Chinhu chekuzvikudza kwazvo nekuona izvo zvavakawana mune pfupi pfupi nguva.
Erle Robotic yakagadzirwa muAlava uye kubvira payakatanga, pakupera kwegore ra2012, vakazvipira mukugadzira nekugadzira marobhoti-echizvarwa anotevera, vachipayona zvigadzirwa zvavo uye vachiita kuti vanhu vataure nezvavo mukusarudza Silicon Valley uye nevadyidzani vakaita seCanonical vanoshanda kugadzira zvigadzirwa. mhando uye yakanangana nekushandisa. Uye kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvake, ndinokukurudzira kuti uverenge iyo yakazara kubvunzurudzwa ...
LinuxAdictos: Erle Robotics akauya sei uye zita racho rinobva kupi?
Victor Mayor: Erle robotics Yakatanga mukupera kwegore ra2012 naDavid naVíctor Mayoral Vilches, hama mbiri dzinofarira robhoti. David akasarudzika mune bhizinesi chikamu, achipedzisa zvidzidzo zvake mune mamwe emabhizimusi ane mukurumbira zvikoro muEurope (IE Bhizinesi Chikoro, ICADE) apo Victor achipedza zvidzidzo zvake zveinjiniya ndokutanga kushandira hurumende yeItari semuongorori muMicroBiorobotics Center ye Italian Institute of Technology (mbr.iit.it).
Takatanga nekupa mari yekutanga prototypes kuburikidza nezvipo, zvikwereti uye neyedu mihoro. Takashanda kazhinji yenguva tiri kure. Kunyangwe nenzvimbo dzakasiyana nguva. Mumwedzi ichangopfuura, Erle akazvikomberedza aine timu ine tarenda uye ine shungu inotsvaga kusimudzira inotevera tekinoroji shanduko: marobhoti.
Erle zvinoreva "nyuchi" muchiBasque uye zita rinobva pakuti madhoni edu ekutanga akaburitsa ruzha rwakafanana nerwenyuchi.
THE:Iwe unoshandira kambani yakatsaurirwa kumarobhoti uye drones. Vanhu vanogona kufunga kuti sevamwe vazhinji, asi chii chinoita kuti Erle Robotic asiyane nevamwe?
VM:Erle Robotics inovandudza huchenjeri hwekugadzira marobhoti uye madroni. Isu nhasi tiri vamwe vevagadziri vashoma pasi rino vanogadzira yakadzika Linux-yakavakirwa makomputa anosanganisira iyo yekuona uye algorithm (Erle-Brain) inodiwa kugadzira mhando dzakasiyana dzemarobhoti (Erle-Copter, Erle-Plane kana Erle-Rover). Isu tiri kunyatso kutsanangudza ramangwana remarobhoti kuburikidza neyakavhurika Hardware uye software mapuratifomu.
Pamusoro pezvo, ndaizosimbisa chokwadi chekuti vazhinji vedu vakazvipira mainjiniya vane ruzivo rwekare mumunda weerobhoti padanho repasi rose.
Semuenzaniso, Irati inounza edu ese mazano kune hupenyu nekugadzirisa mamakanika uye dhizaini dhizaini. Alex, pamusoro pekuve nyanzvi pakuona kwemakomputa, akashanda kwemakore aine marobhoti akazvimiririra epasi. Iñigo ane ruzivo mumakambani akati wandei ekune dzimwe nyika uye mayunivhesiti anogadzira zvigadzirwa. Carlos muongorori ane ruzivo rwepasi rese mumaindasitiri maficha uye mune manejimendi emapurojekiti etekinoroji, nezvimwe.
THE:Ndeipi sisitimu yekushandisa uye software yaunoshandisa kugadzira zvigadzirwa zvako?
VM:Erle Robotics anoshandisa Linux-based operating systems. Isu tinoshandura iyo kernel pachedu kuti tiwane chaiyo-nguva mhinduro kune izvo zvido zveumwe neumwe wemarobhoti edu. Nhasi tine zvinyorwa neDebian uye Ubuntu.
Isu tinoshandisa kushingairira ROS, APM, mavlink, uye mamwe akawanda akavhurika masaga.
THE:Kubva ku blog yedu takaratidza zvimwe zvezvawakawana. Seyekutanga App Store yemadhoni yawakawana pamwe neCanonical, yekutanga otomatiki mutyairi wendege yedrones uye yekutanga drone ine Ubuntu Core (Erle-Copter). Jerry Sanders, mubatanidzwa we AMD aigara achitaura kuti kurwisa hofori Intel pakanga pasina sarudzo kunze kwekuvandudza. Ndihwo uzivi hwako here?
VM:Hapana mubvunzo! Isu tinokwikwidza mumusika neinoshamisa dynamism uye uko kune makambani anoshandisa mamirioni eur chete pakushambadzira.
Yedu uzivi inoenderana zvakanyanya nevamwe veAlan Kay makotesheni "nzira yakanakisa yekufungidzira ramangwana kuigadzira". (Kunyangwe iniwo ndinonamira neiyo ye "vanhu vane hanya nesoftware vanofanirwa kugadzira yavo Hardware").
THE:Canonical inyanzvi yekudyidzana naye. Iyo yakwanisa kumisikidza Ubuntu seimwe yeanonyanya kukosha uye anoshandiswa zvakanyanya kugoverwa kweLinux. Ndeapi mabhenefiti anofambidzana akadaro ane simba mumunda weerobhoti uye drones anounza iwe?
VM:Ichokwadi. Robhoti yakafambira mberi zvishoma nezvishoma kwemakore mazhinji. ROS yakabatana mipiro inobvumira budiriro kukura zvakanyanya nekukurumidza. Canonical inopa mhinduro kune chimwe chinodiwa munzvimbo ino, musika wekushandisa uye maitiro anokurudzira chizvarwa chinotevera chevanjiniya vechirume nevakadzi kuti vauye nekodhi yavo kumarobhoti pasi rese.
THE:Zvakanaka, ndinofunga kuti kubatsirwa ndekwekuwirirana. Erle Robotics inobatsirawo Ubuntu Core kukura uye iwe unopa kodhi, handiti?
VM:Kubva kuna Erle Robotic isu tinotsigira basa reCanonical neUbuntu Core uye isu tinogovana yakasununguka uzivi iyo kambani yanga ichiparadzira kwemakore.
THE:Chii chaungandiudze nezve IoT? Zvinoita kunge zvine "fashoni" nguva pfupi yadarika. Kubva kuna Erle Robotic iwe urikudzidzawo uyu musika mutsva kupfuura marobhoti uye drones?
VM:Isu tinogadzira njere dzehupenzi dzakangwara. Hatisi kutonga kunze kuti dzinogona kushandiswa mune zvakajairika mashandisi ekushandisa.
THE:Iwe unoda kushandura Erle Robotic kuita kambani huru, bhenji yepasi rose mumarobhoti. Iyo ichiri kambani diki kwazvo, ingangoita mwana achangozvarwa, ane vashandi vapfumbamwe (kana ndisiri kukanganisa) uye kunyangwe izvi pane zvakawanda zvekutaura nezvako, iwe uri muTop 9 yeanovimbisa ekutanga mavambo pasi. .. Kwatiri, Erle Robotic yatove imwe yemakuru. Haufungi iwe
VM:Iwo marobhoti musika uchiri mudiki uye Erle Robotic ane nzira refu yekufamba. Tinofanira kukura zvakanyanya uye pakati pezvinangwa zvedu mumwedzi mishoma inotevera kuhaya vanopfuura gumi linux vakapindwa muropa.
THE:Kubva kubhulogi redu tinogara tichidzivirira yakavhurwa sosi, iyo Linux kernel uyezve kune nzvimbo yemahara Hardware, senge Arduino. Kune iwe zvakare inomiririra chombo chine simba. Semuenzaniso, iwe wakashandisa ArduPilot Mega sehwaro hwaErle-Brain, wakasarudza Ubuntu Core yeErle-Copter, iwe unoshandisa ROS, nezvimwe. Vazhinji vanorwisa emahara kana akavhurwa masosi mapurojekiti uye vanotaura kuti anoitwa nevamateurs, kuti ndeemhando isina kunaka, kusachengeteka zvakanyanya, nezvimwe. Boka rose rezvikonzero zvekudzivirira zvakavharwa zvigadzirwa. Ungati kudini kuvanhu ava?
VM:Makore ekupedzisira makumi maviri ekugadzirwa kwesoftware aratidza kuti yakavharwa tekinoroji inosara kumashure apo mapurojekiti akavhurika anova zviyero uye kutsungirira Ngatirege kukanganwa zvakare kuti mazhinji eaya "akavhurwa sosi" mapurojekiti anotungamirwa nedzimwe dzakanakisa pfungwa pasi.
Tora semuenzaniso iyo Linux kernel. Iyo makambani akakodzera kwazvo munyika yekomputa Vanga vachitsigira kernel uye iyo Linux Foundation kwemakore uye vanoziva kuti chakangwara chinhu kuita kusiyanisa kukura uye kuomarara kweiyo kernel (17 mamirioni emitsetse yekodhi).
Chimwe chinhu chakafanana chinoitika neAPM uye yayo 700.000 mitsara yekodhi iyo inoita kuti zvikwanise kuumba zvimiririra zvisina kumisikidzwa mota. 700.000 mitsara yakaongororwa, kuongororwa uye kubvunzwa nemazana evanogadzira uye zviuru zvevashandisi kutenderera pasirese. Erle Robotic mainjiniya ari pakati pe vatsigiri vakuru APM uye tungamira shanduko kune mapuratifomu matsva (post pane shanduko kuenda kuLinux). Ini pachangu ndinofunga kuti kushoropodzwa kwetekinoroji yakavharwa kune yakavhurika kune kukosha kudiki. Kushaikwa kwemusiyano kuri pachena. Naizvozvo, mazuva mashoma apfuura ndakapa mumwe wevatungamiriri mumusika weEuropean wakavharika tekinoroji kuti aenzanise netekinoroji yedu yeAPM-asi ndingazoshamisika kana vakabvuma.
Mune marobhoti mamiriro acho ari kutonyanya kujeka. ROS, marobhoti anoshanda sisitimu yakakosha yekuvandudza mashandiro nemarobhoti (chimwe chinhu senge SDK yemarobhoti).
Munguva yekupedzisira semester ya2014 ndakave nemufaro wekushanda muMountain View, California neOpen Source Robotics Foundation yakanangana nekuvandudza ROS 2.0, chizvarwa chinotevera chegadziriro uye ndinogona kukuvimbisa kuti ROS 2.0 ichaisa hwaro hwe robhoti makore mashoma apfuura. makore gumi anotevera.
THE:Ese akavhurwa sosi mapurojekiti akakosha kudzidzo. Tiudze chimwe chinhu nezve DronEDU.
VM:Isu tinowanzo govana kuti ramangwana remarobhoti harisi kuzove mune humanoid inokosha zviuru zvemayuro asi muLinux-based marobhoti, mutengo wakaderera uye pamusoro pezvose mukugadzira uye kushuvira kwechizvarwa chinotevera cheinjiniya nemainjiniya.
DronEDU chirongwa chinotsvaga kuunza drones kune wese munhu anofarira. Isu tinopa zvakaderedzwa, isu tinoshingairira kubatanidzwa mukutaura uye isu tinotsigira musangano weerobhoti uye drones zviitiko.
THE:Ikozvino pane kurwa uye nharo dzehunhu nezve njodzi yemarobhoti neAI mune ramangwana, njodzi dzekushandisa zvisirizvo kworudzi urwu rwetekinoroji, nezvimwe. Uri kutya here kuti chimwe chezvisikwa zvako chinokumirira iwe pakubuda? Hahaha, kwete chaizvo. Ndeipi pfungwa inokodzera iyi nhaurwa kubva kune nyanzvi?
VM:Hatizvione sevanyanzvi zvachose. Robhoti ine nzira refu yekuenda zvakadaro, asi kufambira mberi kwesainzi hakutityise. Pane kupokana, isu tinofara kukwanisa kuvatungamira uye kuve chikamu cheiyi nyowani yehunyanzvi wave.
Hunyanzvi hwekugadzira hunotibvumidza kuti tiite kwakasiyana kwesainzi Ichiri chinhambwe, asi muErle, huropi hwedu hwekugadzira uye marobhoti zvatotanga kusanganisira kudzika kwekudzidza algorithms anotibvumidza isu kuwana quasi-dzevanhu kugona mumabasa akakosha.
Ndinovimba iyi bvunzurudzo yenyaya dzino yakufadza uye rangarira kuti zvimwe zvichauya. Kana iwe uine mazano kubva kune mumwe munhu waungade kuti tibvunze, siya zvaunotaura uye ndiani anoziva…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Kubvunzana naVictor Mayoral Vilches, mubatanidzwa-muvambi weErle Robotic